इलेक्ट्रोनिक्स सामग्रीमा अफरै–अफर- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
इलेक्ट्रोनिक्स सामग्रीमा अफरै–अफर
टीभी, रेफ्रिजेरेटर, वासिङ मेसिन, मिक्स्चर, फिल्टरलगायत सामानमा कम्पनीले किन्दा नगद छुटदेखि बम्पर उपहारसम्म
आश्विन १८, २०७८ नुमा थाम्सुहाङ
काठमाडौँ — दसैंतिहार नजिकिएसँगै विद्युतीय बजारमा पनि चहलपहल बढेको छ । सामान्यतया लुगाफाटाको किनमेल बढ्ने यो समयमा घरमा आवश्यक विद्युतीय सामग्री किन्नेको पनि भीड बढेको छ ।
चाडपर्वलाई ध्यानमा राख्दै विभिन्न कम्पनीले टीभी, रेफ्रिजेरेटर, वासिङ मेसिन, मिक्स्चर, फिल्टरलगायत सामग्रीमा छुटका अफर तथा उपहार योजनासमेत ल्याएका छन् । सामसङ, एलजी, टीसीएल, गोदरेज, साओमी र केन्टले आफ्ना नयाँ तथा पुराना उत्पादनमा नगद छुट र उपहार योजना ल्याएका हुन् ।
सामसङ नेपालको ‘छुटको तरंग, दसैंतिहारमा उमंग’ योजना छ । यो योजनाअनुसार सामसङ टीभी तथा डिजिटल अप्लाइन्सेस खरिदमा छुट पाइनेछ । सामसङका टीभी, रेफ्रिजेरेटर र वासिङ मेसिनको खरिदमा अधिकतम ३५ प्रतिशतसम्म छुट र निःशुल्क जडानसमेत गरिने कम्पनीले जनाएको छ । साओमी नेपालले भने ‘मी लेको छैन ?’ योजना ल्याएको छ । यो योजनाअन्तर्गत मी एलईडी टीभी र अन्य सामग्री खरिदमा छुट पाइने साओमी नेपालका कन्ट्री जनरल म्यानेजर सौरभ कोठारीले बताए ।
एलजी, टीसीएल, गोदरेज र केन्टको आधिकारिक विक्रेता रहेको सीजी इलेक्ट्रोनिक्सले पनि चाडबाड लक्षित योजना ल्याएको छ । एलजीको ‘हार्दिक बधाई तपाईंलाई, यस चाडबाडमा विशेष सबैलाई’, टीसीएलको ‘यस दसैंतिहार, टीसीएलमा क्यासब्याक र बम्पर उपहार’, गोदरेजको ‘नाउ इज वाउ फेस्टिबल, कम खर्च धेरै बचत’ र केन्टको चाडबाड विशेष योजना छ । यी योजनाले उपभोक्तालाई नयाँ सामग्री खरिदमा सहयोग पुग्ने कम्पनीले विश्वास लिएको छ ।
एलजीले साधारण टीभी, स्मार्ट टीभी र साउन्ड बारको खरिदमा क्यासब्याकको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै एसी, वासिङ मेसिन र हिटरको खरिदमा निःशुल्क जडान सुविधा, नगद छुट र उपहार दिएको छ । सीजीले ल्याएको ‘यो उत्सवमा घरलाई बनाऔं सीजी स्मार्ट होम’ योजनामार्फत कम्पनीको कुनै पनि सामग्रीको खरिदमा क्यास ब्याक र उपहार पाइनेछ । यस योजनामा हरेक १५–१५ दिनमा लक्की ड्रमार्फत सीजीको डबल डोर रेफ्रिजेरेटर ५ जनालाई र बम्परमा ३ जोडीलाई २ रात तथा ३ दिनको मेघौली सेराईको प्याकेज जित्न सकिनेछ । सीजीका एलईडी टीभी, रेफ्रिजेरेटर, चेस्ट फ्रिजर, सोकेस, कुलर र भ्याकुमको खरिदमा २ हजारदेखि ४ हजार रुपैयाँसम्म क्यास ब्याक पाइने कम्पनीले जनाएको छ ।
टीसीएल ब्रान्डका कुनै पनि सामग्री किन्दा ५८ हजार ७ सय रुपैयाँसम्मको क्यासब्याक प्राप्त गर्न सकिन्छ । यस योजनामा बम्पर उपहारअन्तर्गत २ जना ग्राहकले ५५ इन्चको टीसीएल कर्भ स्मार्ट एलईडी टीभीसमेत जित्न सक्नेछन् । यसैगरी, गोदरेजले आफ्ना उत्पादनमा ३१ प्रतिशतसम्मको क्यासब्याक दिएको छ । साथै तीन जना विजेताले ५५ इन्चको टीसीएल कर्भ स्मार्ट एलईडी टीभी पाउनेछन् ।
अनलाइन सपिङ, रङ र इन्टरनेट कम्पनीका पनि छुट योजना
अनलाइन सपिङ प्लेटफर्म, रङ उत्पादक र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले पनि चाडबाडलाई लक्ष्य गर्दै थरीथरीका छुट तथा उपहारका प्याकेज ल्याएका छन् । अनलाइन सपिङ दराजले ‘दराज दसैं धमाका’, केएनपी नेपालले ‘दसैंमा केएनपीको रङमा दंग’, वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले ‘दसैंको बहार बडा उपहार’ र भायनेटले ‘भायनेट बडा दसैंमा, बडा स्पिड, बडा टीभी अफर’ नामक योजना ल्याएको हो ।
दराजका ग्राहकले बम्पर उपहारमा टीभीएस एनटर्क १२५ स्कुटर जित्न सक्नेछन् । कुनै पनि सामग्रीको खरिदमा अनलाइन प्रि–पेमेन्ट गर्दा २० प्रतिशत छुट, निःशुल्क सिपिङ, ५ हजार रुपैयाँसम्मको मेगा भौचर र एक रुपैयाँमै ५० हजार रुपैयाँ बराबरको उत्पादन जित्न सकिने अवसरसमेत रहेको कम्पनीको भनाइ छ । केएनपीको योजनाअनुसार लक्की ड्रमार्फत हरेक साता १ जना विजेताले २० हजार रुपैयाँसम्म जित्न सक्नेछन् भने १ जनाले ५ लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार पाउनेछन् ।
दसैं तथा तिहार विशेष २० हजार रुपैयाँ बराबरको सेवासहितको प्याकेज योजना वर्ल्डलिंकले ल्याएको छ । यसमा प्रयोगकर्ताले मासिक ११ सय रुपैयाँमा ४० एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट प्याकेज पाउनेछन् । यस प्याकेजमा एउटा नेटटीभी निःशुल्क उपलब्ध हुनेछ । यसका लागि प्रयोगकर्ताले १२ महिनाको प्याकेज लिनुपर्ने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । यसैगरी, भायनेटले इन्टरनेट तथा भाय टीभी प्याकेजहरूका साथ ३२ र ५५ इन्चको एमआई एन्ड्रोइड टीभीमा छुट दिनेछ । यसमा ग्राहकले भायनेटको इन्टरनेट र भाय टीभीको कम्बो प्याकेजको वार्षिक सदस्यतामा उच्च गतिको इन्टरनेट पाउन सक्नेछन् ।
प्रकाशित : आश्विन १८, २०७८ ०७:३८
गोठालालाई बाघले घेरेपछि...
आश्विन १८, २०७८ मधु शाही
बाँके — सात महिनाकी गर्भवती कालिका खड्कालाई आफ्नै ज्यान धान्न धौधौ थियो । जंगलमा बाख्रा चराउँदै गरेकी उनका अगाडि शनिबार एक्कासि दुई–दुईवटा पाटे बाघ आएर तेर्सिए । कहिल्यै रूख नचढेकी उनी सकीनसकी रूख चढेर ज्यान जोगाइन् । उनीसँगै गोठाला गएका ६० वर्षीय सेतु ओलीले पहिला कालिकालाई रूख चढ्न सघाए । अनि, आफ्नो ज्यान जोगाउन अर्को रूखमा चढेको बताए ।
बाख्रा र भैंसीको बथान बिथोलिरहेको बाघलाई उनीहरू रूखमै बसेर हेरिरहे । अलि पर भैंसी चराउँदै गरेकी २८ वर्षीया हीरा खड्का पनि बाघदेखि जोगिन उस्तै संघर्ष गरिरहेकी थिइन् । उनको एउटा खुट्टामा समस्या भएकाले दह्रोसँग टेक्न भर छैन । निर्धक्क दौडधुप गर्न सक्दिनन् । बाँच्नका लागि संघर्ष भनेजस्तै उनी अपाहिज खुट्टाकै भरमा रूख चढेर बाघको आक्रमणबाट बच्न सफल भएको सुनाइन् ।
बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकास्थित गाभरका बासिन्दाले पछिल्लो समय यसरी नै बाघ देख्दै आएका छन् । एक महिनाअघि बाघको आक्रमणबाट गाउँवासीको मृत्यु भएको घटना ताजै छ । जंगल नगई गुजारा चल्दैन । यहाँका अधिकांश बासिन्दा गोठाला गरेर जीवन चलाउँछन् । यद्यपि, जंगल र जीवन उस्तै छ उनीहरूका लागि । ‘पानी परिरहेको थियो,’ कालिकाले शनिबार गोठाला गएका बेलाको घटना सम्झिँदै भनिन्, ‘भुइँमा बाघले बाख्रा र भैंसी लखेटिरह्यो, हामी थरथरी काप्दै रूखबाट हेरिरह्यौं । चिच्यायौं, करायौं ।’ घस्रिँदै रूख चढ्दाको दुखाइ कालिकाले भोलिपल्ट मात्रै महसुस गरेको सुनाइन् । गर्भको बच्चा स्वस्थ छ कि छैन उनलाई थाहा छैन । ‘आज कसोकसो पेट चस्किरहेछ । यद्यपि, बाघको आहारा हुनबाट आफू र गर्भको बच्चालाई बचाउन सकेकामा आफूलाई भाग्यमानी सम्झिन्छु,’ उनले भनिन् ।
हीराले भने एक घण्टा रूखमै बाघको चुरीफुरी देख्दा अब बाँच्ने अन्तिम क्षण आएको अनुभूति गरेको बताइन् । ‘भैंसी चराउँदै थिए, पछाडिबाट आयो,’ उनले भनिन्, ‘कहिल्यै रूख नचढेकी म खै कसरी चढें, थाहै छैन ।’ उनका अनुसार शनिबार दिउँसो १२ बजेतिर बाघ आएको थियो । तीन जना गोठाला रूखमै आत्तिएको देखेर जंगलमा हात्ती चराउन पुगेका माउतेले उनीहरूको उद्धार गरी घरसम्म पुर्‍याएको हीराले सुनाइन् ।
जंगलको छेउमै रहेको बस्ती हो, गाभर । यहाँका धेरैजसो महिला खेती किसानी गरेर जीविकोपार्जन गर्छन् । गोठाला जानेमा पनि महिला नै बढी छन् । निकुञ्जले जंगल नजाउ भन्छ । तर, उनीहरू जंगल नगई घर खर्च नचल्ने दुखेसो पोख्छन् । २३ वर्षदेखि गाभरमा बस्दै आएका सेतुले गोठाला गर्न जंगल नगई नहुने बताए । ‘एकातिर निकुञ्जले जंगल गएको भन्दै गाली गर्छ, अर्कोतिर बाघले तर्साउँछ,’ उनले भने, ‘हामी कहाँ जाने ? घरमै बाख्रा र मान्छे खान आउँछ बाघ !’
गाभरकी लक्ष्मी आचार्यका अनुसार पहिला पहिला बाख्रा मारे पनि बाघ गाउँमा देखा पर्दैनथ्यो । ६ महिनायता बाघ गाउँ छेउछाउ आउन थालेको हो । कहिले राजमार्ग त कहिले गाउँमै बाघ घुमिरहेको देखिन्छ । बाघको त्रासले स्थानीय राति बाहिर निस्कन सक्दैनन् । उनले भनिन् ‘हाम्रो बस्ती सारिदिए हुन्थ्यो, नभए बाघको डर भयो ।’ राप्तीसोनारी–१ का वडाध्यक्ष चन्द्रबहादुर वलीले गाभरका झन्डै डेढ सय घर सुरक्षित गर्न चुनौती रहेको बताए । बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघको आक्रमणबाट अहिलेसम्म तीन जनाको मृत्यु भएको छ । जंगलमा घाँस–दाउरा र गोठाला गएका बेला बाघले आक्रमण गरेर उनीहरूको मृत्यु भएको निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत श्यामकुमार साहले बताए । गएको भदौ महिनामा राजमार्गभन्दा सय मिटरभित्र गाभर क्षेत्रमा बाघले एक जना पुरुषमाथि आक्रमण गरेको थियो । त्यसभन्दा पहिले पटक–पटक सडकमा बाघ देखा पर्ने, बस्ती छेउछाउ आएर गाईबस्तु आक्रमण गर्दै स्थानीयलाई सताएको थियो ।
प्रकाशित : आश्विन १८, २०७८ ०७:३३
९ सय रुपैयाँ घट्यो सुनको मूल्य
आईएमएफको सुझाव– ‘वित्तीय क्षेत्रको नियमन र सुपरिवेक्षण बलियो बनाऊ’
मुग्लिङ–नागढुंगा सडकमा मालवाहकलाई अब छुट्टै लेन
विश्वव्यापी चुनौती बन्दै क्रिप्टो कारोबार
शीत भण्डारले सुन्तलाको आम्दानी दोब्बर
नेपालको लगानी वातावरण दक्षिण एसियामा पाकिस्तानपछि सबैभन्दा खराब
षड्यन्त्र गर्ने कि चुनाव
केशव दाहाल माघ १३, २०७८
फेरि चुनावी बहस सुरु भएको छ । निश्चय नै, लोकतन्त्रको गतिशीलताका लागि निर्वाचन आवश्यक छ । तर कस्तो निर्वाचन ? ज्ञानेन्द्रको जस्तो ? पञ्चायतको जस्तो ? कि लोकतन्त्रको जस्तो ? शासकहरूलाई...
स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने कानुन किन ?
किरण चापागाईं माघ १३, २०७८
सत्रौं शताब्दीसम्म पनि सार्वजनिक पदमा हुनेले निजी स्वार्थका लागि आफ्नो कार्यालय र पदको दुरुपयोग गर्नु स्वाभाविक मानिन्थ्यो । तर जब विश्वमा प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको विस्तार...
वैदेशिक रोजगारी शासनको स्थानीयकरणमा चुनौती
जीवन बानियाँ माघ १३, २०७८
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले यूएई भिसा सेन्टर उद्घाटन गरेको तथा परराष्ट्र मन्त्रालय तथा यूएईस्थित नेपाली दूतावासलाई यसबारे औपचारिक जानकारी नदिइएको समाचार कान्तिपुर...
भ्रष्टाचार सूचकांकमा प्रतिविम्बित राज्य सञ्चालकहरूको अनुहार
सम्पादकीय माघ १३, २०७८
चार वर्षअघि बनेको बलियो जननिर्वाचित सरकार सन् २०२१ को जुलाई आधाआधीसम्म टिकेको थियो । सुशासनलाई लिएर उसको नारै थियो— भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता । जगजाहेरै छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा...
संविधानका आँखामा चोलेन्द्रशमशेर राणा
बलराम केसी माघ १२, २०७८
चोलेन्द्रशमशेर राणाका दुई व्यक्तित्व छन् । एउटा, नेपालको संविधान–२०७२ को धारा १६(१) बमोजिम ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने’ मौलिक हक सम्पन्न नागरिक व्यक्तित्वको । यो हैसियतमा उनलाई धारा २८...
उदारवादी जमातको विभ्रम
सीके लाल माघ १२, २०७८
समाज बुझ्न सञ्चारमाध्यम पछ्याउनुपर्छ भन्ने मान्यताका आफ्नै सीमितताहरू छन् । तात्कालिक सूचना प्रवाह एवं तत्क्षण विश्लेषणको दबाबले गर्दा अन्तर्जालका पाटीहरू आफ्ना मूल अवलोकनकर्ताहरू (कोर आडिअन्स) को...
सहनशीलताको संस्कृति !
प्रीति मित्तल माघ १२, २०७८
हुर्किंदै गरेकी केटीको जीवन, लज्जा र मौनतावरिपरि घुमिरहन्छ । महिलालाई सानैदेखि खुट्टा खुम्च्याएर बस्न र आफूलाई छोप्न सिकाइन्छ । महिला भएर जन्मिनु पाप नै होजस्तो महसुस गराइन्छ ।...
सम्पदा संरक्षणमा होस्ल्याङे प्रवृत्ति
सम्पादकीय माघ १२, २०७८
इतिहास र सभ्यता हिजोको आजै बनेका हुँदैनन् । सयौं वर्षको कालखण्डका अनेकौं तथ्यहरूको उत्खनन–अन्वेषण, अभिलेखीकरण र प्रमाणीकरणजस्ता कार्यहरूको बलमा मात्रै सभ्यता निर्माणको वास्तविक इतिहास जान्न सकिन्छ ।...
मधेशप्रति केको द्वेष ?
राजेन्द्र महर्जन माघ ११, २०७८
कोशी ब्यारेजमा थुनिएका सातकोशीर पटक–पटक संविधानको थाङ्नामा सुताइएकायहाँका मानिसको निद्रामाकुनै अन्तर छैनकि कहिलेसम्म अँध्यारोले राज्य चलाउने होसुन्दर कालो चारकोसे मधेशमा ।- स्वप्निल स्मृति/मधेश
१९५० को सन्धि, ईपीजी अनि गोर्खा परिचय
हर्कबहादुर छेत्री माघ ११, २०७८
भारतमा गोर्खाको राजनीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको चर्चालाई प्राथमिकता दिने श्रेय सुवास घिसिङलाई जान्छ । अलग राज्यको आन्दोलनबाट सुरु भएको राजनीतिमा ऐतिहासिक आधार आवश्यक भएका कारण अनि चिनारी...
पूर्ण खोप प्राप्त १,३१,०६,७२६
अपडेटः मंगलबार, ११ माघ, २०७८ । १६ : ५५ बजे